Keloids and hypertrophic scars - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Keloids & hypertrophic scars(ကီးလှိုကျနဲ့အမာရှတျကွီးမြားအကွောငျး မှတျသားဖှယျရာမြား)
အနာဖွဈသောနရောတှငျကျောလဂငျြ (collagen)လိုအပျသညျထကျပို၍ထှကျခွငျးကွောငျ့ မူလဒဏျရာထကျကွီး၍ ဖွဈလာသောအမာရှတျကို ကီးလှိုကျဟုချေါသညျ။ ကိုငျကွညျ့လြှငျ ရာဘာကဲ့သိျု့တငျးတငျးရငျးရငျး (သို့) မာမာဖုဖု အမြိုးမြိုးဖွဈနိုငျသညျ။ အရောငျမှာလညျး ပနျးရောငျ၊အနီရောငျ၊အသားရောငျ(သို့) အညိုရောငျ ဖွဈနိုငျပါသညျ။
၁၀နှဈ နှငျ့ အသကျ၂၀ကွားတှငျအဖွဈမြားသညျ။ အာဖရိကလူမြိုးနှငျ့ အာဖရိကနျ-အမရေိကနျလူမြိုးမြားတှငျအတှအေ့မြားဆုံးဖွဈသညျ။ မိဘတှငျဖွဈဖူးလြှငျလညျးဖွဈတတျပါသညျ။
အရပွေား ပှနျးပဲ့ဒဏျရာရှိသောနရောတိုငျးတှငျဖွဈနွိငျပါသညျ။ ကုတျခွဈရာ၊ဝကျခွံ၊နားပေါကျဖောကျခွငျး၊ အငျးဆကျပိုးမှားကိုကျသောနရောမြား၊ကာကှယျဆေးထိုးသောနရော၊ မီးလောငျဒဏျရာနှငျ့ ခှဲစိတျထားသောနရောမြား၌လညျး ဖွဈတတျသညျ။
ယားယံ ခွငျး(သို့) နာကငျြခွငျးတို့ဖွဈတတျသညျ။ အဆဈအမွဈနရောမြားတှငျဖွဈလြှငျမူ ထိုအဆဈ၏လှုပျရှားမှုကို အနှောငျ့အယှကျပေးနိုငျပါသညျ။
ကာကှယျခွငျးသညျအရေးကွီးသညျ။ အထကျပါဖျောပွထားသော ဖွဈနိုငျခွရှေိသောလူမြားတှငျ အရေးတကွီးမလိုအပျပဲ အလှအပအတှကျခှဲစိတျခွငျး၊မှဲ့ဖယျထုတျခွငျး၊နားပေါကျဖောကျခွငျးနှငျ့ ခန်ဓာကိုယျအခွားနရောမြားတှငျအပေါကျဖောကျခွငျးတို့အား ရှောငျကွဉျသငျ့သညျ။ ကုသမှုမြားမှာ ခှဲစိတျခွငျး၊ လဆောကုထုံး၊ ဓာတျရောငျခွညျကုထုံး(superficial external beam radiotherapy) ၊ အအေးဓာတျသုံးကုထုံး (Cryotherapy) ၊ ဖွဈသောနရောသို့ ဆေး(steroid)ထိုးခွငျး နှငျ့ လိမျးဆေးသုံးခွငျး အစရှိသညျတို့ဖွဈပါသညျ။
အမာရှတျကွီး (Hypertrophic scar) ဆိုတာဘာလဲ?
ကီးလှိုကျ (keloid) နှငျ့ အမာရှတျကွီး(hypertrophic scar)တို့၏ကှာခွားခကျြမှာ အမာရှတျကွီး သညျမူလဒဏျရာထကျပိုမကွီးလာဘဲ အပျေါဘကျသို့သာကွီး၍ထူလာခွငျးဖွဈသညျ။ ပနျးရောငျ(သို့) အနီရောငျရှိနိုငျသညျ။ ကီးလှိုကျနဲ့တူသောအခကျြမြားမှာ အသကျအန်တရာယျမရှိ၊ ကူးစကျတတျခွငျးမရှိပါ။ယားခွငျး၊နာခွငျးတို့လညျးဖွဈတတျသညျ။ ဖွဈပှားတတျသောနရောမြားလညျးတူသညျ။ ဤအမာရှတျမြိုးဖွဈဖူးလြှငျ ခှဲစိတျမှုမပွုလုပျခငျ ဆရာဝနျအားကွိုတငျအသိပေးသငျ့ပါသညျ။
Keloids & hypertrophic scars(ကီးလွိုက်နဲ့အမာရွတ်ကြီးများအကြောင်း မှတ်သားဖွယ်ရာများ)
အနာဖြစ်သောနေရာတွင်ကော်လဂျင် (collagen)လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ထွက်ခြင်းကြောင့် မူလဒဏ်ရာထက်ကြီး၍ ဖြစ်လာသောအမာရွတ်ကို ကီးလွိုက်ဟုခေါ်သည်။ ကိုင်ကြည့်လျှင် ရာဘာကဲ့သို့်တင်းတင်းရင်းရင်း (သို့) မာမာဖုဖု အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်။ အရောင်မှာလည်း ပန်းရောင်၊အနီရောင်၊အသားရောင်(သို့) အညိုရောင် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၁၀နှစ် နှင့် အသက်၂၀ကြားတွင်အဖြစ်များသည်။ အာဖရိကလူမျိုးနှင့် အာဖရိကန်-အမေရိကန်လူမျိုးများတွင်အတွေ့အများဆုံးဖြစ်သည်။ မိဘတွင်ဖြစ်ဖူးလျှင်လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။
အရေပြား ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာရှိသောနေရာတိုင်းတွင်ဖြစ်နိင်ြပါသည်။ ကုတ်ခြစ်ရာ၊ဝက်ခြံ၊နားပေါက်ဖောက်ခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားကိုက်သောနေရာများ၊ကာကွယ်ဆေးထိုးသောနေရာ၊ မီးလောင်ဒဏ်ရာနှင့် ခွဲစိတ်ထားသောနေရာများ၌လည်း ဖြစ်တတ်သည်။
ယားယံ ခြင်း(သို့) နာကျင်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။ အဆစ်အမြစ်နေရာများတွင်ဖြစ်လျှင်မူ ထိုအဆစ်၏လှုပ်ရှားမှုကို အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ကာကွယ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ အထက်ပါဖော်ပြထားသော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောလူများတွင် အရေးတကြီးမလိုအပ်ပဲ အလှအပအတွက်ခွဲစိတ်ခြင်း၊မှဲ့ဖယ်ထုတ်ခြင်း၊နားပေါက်ဖောက်ခြင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အခြားနေရာများတွင်အပေါက်ဖောက်ခြင်းတို့အား ရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ကုသမှုများမှာ ခွဲစိတ်ခြင်း၊ လေဆာကုထုံး၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး(superficial external beam radiotherapy) ၊ အအေးဓာတ်သုံးကုထုံး (Cryotherapy) ၊ ဖြစ်သောနေရာသို့ ဆေး(steroid)ထိုးခြင်း နှင့် လိမ်းဆေးသုံးခြင်း အစရှိသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
အမာရွတ်ကြီး (Hypertrophic scar) ဆိုတာဘာလဲ?
ကီးလွိုက် (keloid) နှင့် အမာရွတ်ကြီး(hypertrophic scar)တို့၏ကွာခြားချက်မှာ အမာရွတ်ကြီး သည်မူလဒဏ်ရာထက်ပိုမကြီးလာဘဲ အပေါ်ဘက်သို့သာကြီး၍ထူလာခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်းရောင်(သို့) အနီရောင်ရှိနိုင်သည်။ ကီးလွိုက်နဲ့တူသောအချက်များမှာ အသက်အန္တရာယ်မရှိ၊ ကူးစက်တတ်ခြင်းမရှိပါ။ယားခြင်း၊နာခြင်းတို့လည်းဖြစ်တတ်သည်။ ဖြစ်ပွားတတ်သောနေရာများလည်းတူသည်။ ဤအမာရွတ်မျိုးဖြစ်ဖူးလျှင် ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်ခင် ဆရာဝန်အားကြိုတင်အသိပေးသင့်ပါသည်။